Cross Hotels & Resorts dia nanao sonia ny hotely fahatelo any Pattaya
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Cross Hotels & Resorts dia nanao sonia ny hotely fahatelo any Pattaya
Cross Hotels & Resorts dia nanao sonia fifanarahana hanokatra ny Cross Pattaya Phratamnak
Cross Pattaya Phratamnak no fananana voalohany aorian'ny fanovana anarana anarana marika Luxury Hotels & Resorts
Cross Pattaya Phratamnak dia mipetraka eo amin'ny tantsaha stratejika mitazana ny Hoalan'i Thailand ary voahodidin'ny ala maitso maitso
Cross Pattaya Phratamnak dia hisokatra amin'ny volana aogositra 2021
Ny Cross Hotels & Resorts dia nanao sonia fifanarahana fitantanana hotely lehibe miaraka amin'ny Kasetsinn Co., Ltd. hanokatra ny Cross Pattaya Phratamnak. Manoloana ny areti-mandringana mitohy, Cross Hotels & Resorts manohy mandray andraikitra amin'ny maha-mpitondra azy amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny satria manaporofo indray fa mandoa vola ny mazoto amin'ny tsena.
Cross Pattaya Phratamnak no fananana voalohany aorian'ny fanovana anarana nomen'ny marika X2 (Cross To) ka hatramin'ny Cross. Mitovy hevitra amin'ny dia sy ny fiampitana ny ranomasimbe, kaontinanta ary firenena, ny andry iankinan'ny finoana i Cross dia misy ny aingam-panahy voajanahary, ny famolavolana sonia ary ny toe-tsaina fanompoana tsy voafehy. Ny fananana sonia an'ny marika dia mitondra any an-tsena haavo mihalehibe izay mifamatotra amin'ny vondron'olona matanjaka mba hahitana traikefa tsy misy sisin-tany ho an'ireo mpandeha mahira-tsaina sy mahaleo tena ara-bola.
“Faly aho milaza fa ny fifanarahana nifanaovanay tamin'ny Kasetsinn Co., Ltd. dia manokatra fahafaha-manao vaovao ho antsika. Amin'izao fotoana izao, ny maodelin'ny orinasantsika marefo sy maharitra dia manome antsika ny fahaiza-mihetsika hiasa haingana. Mino tanteraka aho fa ny volavolan-kevitray mazava momba ny marika sy ny fizarana manerantany dia namela anay hanatsara ny tombony ho an'ny antoko voakasik'izany rehetra, "hoy i Harry Thaliwal, CEO, Cross Hotels & Resorts.
"Heverinay ho fifanarahana lehibe ity fifanarahana ity miaraka amin'ny Cross Hotels & Resorts satria sambany izahay namolavola fananana toy izany. Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia miorina amin'ny fahatokisana ary mino izahay fa nahita mpiara-miasa tonga lafatra miaraka amin'ny marika marika matanjaka indrindra hitondrana ity trano fandraisam-bahiny mahavariana ity ho an'ny tsena anatiny sy manerantany. Cross Hotels & Resorts dia manana portfolio miavaka amin'ny fananana efa misy ary voninahitra ho anisan'ny fianakaviana aho, "hoy i Thop Chandraprasert, Tale mpitantana ny Kasetsinn Co., Ltd.
Cross Hotels & Resorts dia miasa amin'ny hotely 21 manerana ny marika telo miavaka - Cross, Cross Vibe ary Away - any Thailand, Vietnam ary Indonezia.